40 Askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday Weerar ay Taliban ka fulisay Waqooyiga Afghanistan.
Monday July 13, 2020 - 13:25:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tobanaan katirsan ciidamada dowladda Afghanistan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar naf hurnimo oo ka dhacay waqooyiga wadanka Afghanistan.
Ilo wareedyo maxalli ah ayaa sheegaya in ugu yaraan 40 askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar naf-hurnimo oo uu dagaalyahan jihaadi ah ka fuliyay saldhig ay ciidanka sirdoonka ku lahaayeen gobolka Samnagaan.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliban ayay ku sheegatay mas'uuliyaddan weerarkan istish-haadiga ah oo uu barbar socday weerar xoog kugal ah oo ay fuliyeen dagaalyahanno hubaysan.
Mas'uul uhadlay xukuumadda dabadhilifka Kaabuul ayaa warbaahinta u sheegay in weerarku uu beegsaday saldhig kuyaal meel ku dhow taliska sirdoonka caasimadda gobolka Samnagaan ee lagu magacaabo Baybiik.
"Weerarku wuxuu ahaa mid aad uxooggan wuxuu ku bilaawday gaari miinaysan kadibna dagaalyahanno ayaa gudaha saldhigga ku daatay illaa iyo hadana xabadda ayaa socota" sidaas waxaa yiri Max'med Caziizi oo ah afhayeenka gobolka Samnagaan.
Afhayeenka Imaarada Islaamiga ah ayaa sheegay in weerarkan uu qeyb ka yahay howlgallada jihaadiga ah ee Afghanistan looga xuraynayo shisheeyaha iyo dabadhilifyadooda.